एनजीओको २० अर्ब केमा खर्च ? राज्यलाई थाह छैन - Everest Dainik - News from Nepal
एनजीओको २० अर्ब केमा खर्च ? राज्यलाई थाह छैन
काठमाडौं, असोज १२ । गैरसरकारी संस्था एनजीओले एक वर्षमा विदेशबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भित्र्याए। त्यत्रो रकम कहाँ गयो, केमा खर्च भयो, राज्य बेखबर छ।
नेपालका ७ सय २३ एनजीओलाई २०७४-७५ मा उक्त रकम ल्याउन समाजकल्याण परिषद्ले अनुमति दिएको थियो। तिनको अनुगमन गर्ने काम पनि परिषद्कै हो। तर, ऊ चुपचाप बसेको छ।
याे पनि पढ्नुस युवा स्वरोजगारका लागि सात करोड कर्जा दिइने
यसको अध्यक्ष मन्त्री हुन्छन् । एनजीओहरूले गएको आर्थिक वर्ष १ हजार १ सय ८१ योजना सञ्चालन गरेको कागज देखाएका छन्। त्यसका लागि विदेशबाट ल्याएको २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको दाबी गरेका छन्। अधिकांश गोष्ठी, सेमिनार र तिनको नक्कली तथ्यांक बनाएर बजेट सक्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस बैंकले घटाउन थाले कर्जाको ब्याजदर
ट्याग्स: money, ngo